Faah faahin: Ujeedkii laga lahaa ismiidaaminta ka dhacday Magaalada Muqdisho - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Faah faahin: Ujeedkii laga lahaa ismiidaaminta ka dhacday Magaalada Muqdisho
Ururka Al Shabaab ayaa si rasmi ah u sheegtay masuuliyadda weerarkii ismiidaaminta ahaa, ee maanta ka dhacay agagaarka Isgoyska Sayidka ee Magaalada Muqdisho.
Nin naftii hallige ahaa ayaa isu qarxiyay maqaaxi ay fadhiyeen ciidan ka tirsan kuwa Dowladda Somaliya, oo ku taala Baar Bulsho, warar kala duwan ayaana ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerarkaas.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir, Saalax Xasan Cumar (Saalax Dheere) ayaa sheegay in saddex qof oo isu qoys ahaa ay ku dhinteen qaraxaasi, halka saddex kalena ay ku dhaawacantay.
Afhayeenka ayaa sheegay in khasaaraha uu ka dhashay, ka dib markii nin xirnaa jaakadda ka samaysan walxaha qarxa, uu beegsaday dadkii ku sugnaa maqaaxidaasi.
War ka soo baxay Ururka Al Shabaab ayaa lagu sheegay in naftii hallige maleeshiyadooda ka tirsanaa uu fuliyay weerarkaasi, isla-markaana uu bartilmaameedsaday maqaaxi ay qaad ku cunayeen Ciidamada Dowladda.
Weerarkan ayaa lagu macneeyay mid ka tarjumaya carada ay Shabaabku ka muujiyeen tallaabadii 16-kii bishan loogala wareegay gacan ku haynta Deegaanka Janaale ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Sidoo kale waxaa uu weerarka u muuqdaa mid ay maleeshiyada mayalka adag ee Al Shabaab ugu aargudayeen tiro Saraakiil ahayd, oo maalmo ka hor looga dilay tuulooyinka hoos-tagga Janaale, halka kuwo kalena ayagoo nool gacanta looga soo dhigay.
Si kastaba ha-ahaatee weerarkan ayuu ujeedkiisu noqonaya mid ay Shabaabku ku muujinayan cududooda iyo inay weli weeraro baqdin dadka gelin kara, ay ka gaysan karaan xeendaabyada aadka amnigoodu loo ilaaliyo.